Education | Buzz News
Hey Buzz News Community!
International Celeb News
Copyright © 2019 Buzz News. All rights reserved.
နောင်ရေးအတွက် ငွေစုကြမယ် | Lwin Pyin News
သင့်ဘ၀နောင်ရေး ကိစ္စဖြစ်၍ သင့်ဝင်ငွေ၏၁၀ရာခိုင်နှုန်းစုခြင်းကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ပါ။
15 Jul, 08:31 AM
“သားသမီးတွေ ကြီးလာတဲ့အခါ မိဘတွေ နောင်တရစေမဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေ” | Lwin Pyin News
သူတို့ရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုပုံစံတွေက လွဲမှားမှုတွေရှိနေတဲ့ အခါ ကလေးတွေဟာ လိမ္မာချင်သယောင်ယောင်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆိုးသွမ်းသွားတတ်ကြပါတယ်။
15 Jul, 07:19 AM
တုပ်ကွေးကို အပြုတ်တိုက်မည့်ကြက်သွန်ဖြူ. | Lwin Pyin News
အစာလည်းဆေးဆေးလည်းအစာဆိုသလို တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီဆိုရင်အိမ်မှာပဲပျောက်ကင်းအောင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့တင်ကုသပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်း ကောင်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
11 Jul, 06:35 AM
7 Jul, 07:43 AM
အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးမှာ တကယ်ပျော်ရွှင်ရသူတို့ ပြုမူလေ့ရှိတဲ့ အမူအကျင့် (၁၀) ခု | Lwin Pyin News
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှုရှိရှိ၊ သစ္စာရှိရှိ ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်တဲ့အတွဲဟာ များသောအားဖြင့် မြဲကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမြဲတဲ့အတွဲတွေ၊ အိမ်ထောင်ရှင်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကတော့
6 Jul, 05:04 AM
တစ်ဖက်လူရဲ့ စိတ်အတွင်းပိုင်းကို နက်နက်နဲနဲ သိလိုလျှင် ဒီမေးခွန်းတွေမေးကြည့်ပါ
1 Jul, 01:08 PM
ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ အလွယ်တကူ ငွေစုနိုင်မည့်နည်းလမ်း(၅) ခု
30 Jun, 02:49 AM
စိတ်ခံစားမှုကို ပြတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးလေးများ (၁) | Lwin Pyin News
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းက Phrasal Verbs တွေအကြောင်း ခရီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တာ၊ စိတ်ဆိုးတာနဲ့ဆိုင်တာ၊ ချစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာဆိုပြီး မှတ်ရလွယ်ကူအောင် တူရာစုပြီး ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
28 Jun, 03:10 PM
ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ပါတနာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ
ကိုယ်လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘဝလမ်းခရီးအတွက် ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီပြီး လိုက်ဖက်မယ့် ပါတနာတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေတဲ့အလုပ်ဟာ တကယ်မလွယ်လှပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ အချစ်မရှိဘဲ မနေနိုင်တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်တာကြောင့် ဘဝလက်တွဲဖော် ပါတနာတစ်ယောက် လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။
28 Jun, 11:25 AM
ဒီအချက်(၁၀) ချက်သင့်မှာရှိနေရင် သင်လက်ထပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ
28 Jun, 06:46 AM
ခရီးသွား တဲ့အခါ ငပိန်းတစ်ယောက်လို မဖြစ်ရအောင် | Lwin Pyin News
ခရီးထွက်တယ် ခရီးထွက်တယ်နဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ Tour တွေနဲ့ပဲ သွားဖြစ်နေတာ မမိုက်ပါဘူးကွာ။ တကယ့် ခရီးသွားရတဲ့ အရသာဆိုတာ အဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။
28 Jun, 06:41 AM
English စာအမြန်ဆုံး တိုးတက်ဖို့ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
Englishကောင်းဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ရမှာကတော့ သင်Englishကိုဘယ်မှာအသုံးပြုမှာလဲဆိုတာပါပဲ။ Spea king skill မှာတော်ချင်တာလား?အကုန်လုံးတော်ချင်တာလားစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူငယ် တစ်ေ ယာက်အနေနဲ့4skillsလုံးတော်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်ရှိပေမယ့်...
27 Jun, 03:50 AM
ကမ္ဘာပတ်ပြီး ခရီးသွားချင်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့အရာမျာ
27 Jun, 02:18 AM
အသည်းကွဲပြီးချိန်မှသာ နားလည်လာတဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာ ၆ ခု
26 Jun, 02:16 PM
မီတာခ သက်သာဖို့ ဒါလေးတွေကို လိုက်နာသင့်တယ်
26 Jun, 06:20 AM
ကိုယ့်ချစ်သူကို အမြဲတမ်း ပွင့်လင်းရိုးသားနေဖို့ လိုအပ်ပါရဲ့လား?
လူအများစုက ရိုးသားဖြောင့်မတ်တာကို နှစ်သက်ကြပါတယ် ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ သူတို့ရဲ့ Privacy တွေကိုလည်း တစ်ဖက်လူကို လေးစားစေလိုကြပါတယ် ။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ရိုးသားမှု နဲ့ Privacy စောင့်ထိန်းနိုင်မှုက အမြဲတမ်းတော့ ထပ်တူမကြနိုင်ပါဘူး ။
26 Jun, 06:15 AM